အပြာစာအုပ် – alanlaymyar
Posted on November 11, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
ကျနော့် ရည်းစား လှိုင်လှိုင်နှင်းနဲ့ တွေ့ဖို့ သူမ အိမ်ဖက်ကို ကျနော် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော့် နာမည်က ဝေယံ အသက်က ၂၀ ကျောင်းပြီးထားတာ မကြာသေးတော့ လောလောဆယ် အလုပ် အကိုင် မရှိ ၁၀၉ ၁၁၀ ပေါ့ဗျာ။ လှိုင်လှိုင်နှင်းက ၁၉ နှစ် သူမနဲ့ ရည်းဖြစ်တာ တစ်နှစ်လောက် ရှိပြီ။ လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့ မိဘတွေနဲ့ ကျနော့် မိဘတွေက မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူကြီးချင်းကလည်း ခင်မင်နေတော့ လှိုင်လှိုင်နှင်းတို့ အိမ်ကို ကျနော်က တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ဝင် ထွက် သွားလာပေါ့။ ပြီးတော့ နှစ်ဖက် မိဘတွေကလည်း သဘောတူထားတော့ တခါတလေ သူမတို့ အိမ်နဲ့ ကျနော်တို့ အိမ်မှာ […]
ကျွန်တော်ပိုင်သော သူများမယား ရဲရင့်ဦးအတွက်တော့ မေသက်နွယ်ရဲ့ s..xy ကျသော ခန္ဒာကိုယ်လေးက အရင်ကထက်ပင် ပို၍ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းလွန်းနေသည်။ အနက်ရောင်အတွင်းခံလေးတစ်စုံနှင့် မြင်သူယောက်ျားတိုင်း ငေးမောလောက်ရအောင် လှလန်းနေသည်။ တင်းကားနေသော တင်ပါးများရှေ့တွင် ပိုမောက်ကာ ဖောင်းကြွနေသော မေသက်နွယ်၏ စောက်ဖုတ်လေးက ရဲရင့်ဦးအတွက် မဟုတ်တော့ချေ။ ရဲရင့်ဦးကတော့ ရင်ခုန်မှုများနှင့် အချိန်တစ်ခုကို ဆောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ညဟာ ရဲရင့်ဦးအတွက် cu..ld စိတ်ကို ပုံသွင်းမည့် ညဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရဲရင့်ဦးကို cu…ld ဘဝသို့ ပြောင်းလဲမည့်သူကတော့ မေသက်နွယ်နှင့် သူမ၏ အချစ်ဦး ကျော်ကျော်ထွန်းပင် ဖြစ်သည်။ “မောင်.. ဘယ်လိုလဲ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ခဏနေရင် ကိုကျော်ကျော်ထွန်းလာတော့မယ်နော်” “ဖြစ်ပါပြီကွာ ဒါပေမဲ့ မောင်ရင်တွေခုန်ပြီး လက်ဖျားတွေအေးနေတယ်” “ဟားဟား…. ဖြစ်ရလေမောင်ရယ် မောင်အရင်ကတောင် ဖုန်းထဲကနေကြည့်သေးတာပဲ ခုဟာကအပြင်မှာတွေ့ရမှာ […]
ကျွန်တော့်အဖေမှာ မောင်နှမတေ အများကြီးရှိတယ်…. အဲ့ထဲကမှ သူ့ညီမတစ်ယောက်ကတော့ အပျိုကြီးဗျ …. အသက်က ၃၈ လောက်ရှိပြီ …..အသက်သာကြ်ီးတာ လုံးကြီးပေါက်လှဗျ….. နို့တွေဆိုအကြီးကြီိး ဖင်ကြီးတွေလဲ အကားကြီး ခါးသိမ်သိမ်လေးနဲ့ ….. ဒီလောက် ဘော်ဒီတောင့်တဲ့ ဒေါ်ငယ်လေး ဘာကြောင့် ယောကျာင်္းမယူလဲ ကျွန်တော် မတွေးတတ်ဘူးးးးးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတော့ တစ်အိမ်တည်းတူတူ နေကြသေးတယ် ….. သူက အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့ ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့မြို့ကို ပြန်ရောက်လာပေမယ့် သူ့ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း တစ်အိမ် သပ်သပ်နေတယ် …… တစ်မြိုတည်းဆိုပေမယ့် နည်းနည်းဝေးတယ် …. ကျွန်တော်ကတော့ တော်ရုံ မရောက်ဖြစ်ပါဘူးသူ့ဆ်ီ….. လိုအပ်မှ …. အကြောင်းရှိမှ သွားဖြစ်တယ်…..အဖေကတော့ သူ့ညီမ အပျိုကြီးတစ်ယောက်တည်းနေတာဆိုပြီး ရုံးပိတ်ရက်တွေဆိုသွားသွားလည်တယ် မနက်ကတည်းကသွားရင် ညနေမှပြန်လာတတ်တယ် …. […]
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက အိမ်မာတစ်ယောက်တည်းနေ ဂိမ်းဆော့နေလိုက်တာ အချိန်တစ်နစ်ကျော်ခဲ့ပြီဗျ ဟိုဘက်ခြံက အန်တီလေးရဲ့သမီးတောင် 10 တန်းရောက်ပြီ အော် မေ့လို့ အန်တီဆိုတာက အန်တီအရွယ်မို့နော် သူ့နာမည်က ချိုရီလေ “ဟိတ်ကောင်လေး စားပြီးပြီလား” “ဟုတ်ကဲ့စားပြီးပြီ” “နင့်မေမေ နဲ့ဖေဖေကော” “အော်အလုပ်သွားတယ် ” ” ရော့ထိုးမုန့် နင့်အမေဖို့ချန်ထားအုံးကြားလား” “အော် အန်တီကလဲဒီလောက်အများကြီး မကုန်ပါဘူးဗျ” “ထားပါ ဒါနဲ့နင်အားလား ဟဲ့ ” ” အားပါတယ် ဘာများခိုင်းမလို့လဲ” ” နင်ကစပေလဲဖတ်နေသူဆိုတော့ ငါ့သမီးနဝယ်နွယ်ကို စာသင်ပေးချင်မလားလို့ လစာတော့ ငါကြည့်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား” “အာမဟုတ်တာ ရပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လဲ အားနေတာပဲကို ဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူး အခမဲ့ပါ” ” မလုပ်ပါနဲ့ငါပေးရမာပေါ့ ” “ပြောမရလဲ ကြိုက်သလိုလုပ်ဗျာ” “ဒါဆို မနက်ဖြန်လာသ်နော် နင့်ညီမက […]
💠✴အဖေ့ရဲ့မြေးလား ကျွန်တော့်ရဲ့ညီလား✴💠 ကျနော်အမေက ကျနော် ၆ တန်းနှစ်မှာဆုံးသွားတယ်၊ တစ်ဦးတည်းသောသား အဖေနဲ့ပဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာနဲ့ပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပေါ့၊ ကျနော် ၉ တန်းရောက်တော့ အဖေက ညဖက် အိမ်ပြန်လာရင် အရက်တွေသောက်ပြီး ပြန်လာတတ်လာပြီ။ အဖေအရက်တွေ မူးနေရင်တော့ ဘာမှမပြောတတ်ပဲ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ပြီး တန်းအိပ်တော့တာ၊ အဖေက သန်တုန်းမြန်တုန်းဆိုတော့ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်၊ ကျနော် ၁၀ တန်းရောက်တော့ နောက်မိန်းမတစ်ယောက် ယူလိုက်တယ်၊ သူထက် ၁၅ နှစ်လောက်ငယ်ပြီး အသားက နဲနဲညိုတယ်။ ကိုယ်လုံးကတော့ လုံးလုံးကျစ်ကျစ်ပဲ၊ အဖေမိန်းမ မိထွေး အိမ်ရောက်ခါစက ကျနော်နဲ့ လုံးဝအဆင်မပြေ၊ အဆင်မပြေတာက ကျနော်ဖက်ကပါ၊ အမေနေရာကို ဘယ်သူမှကို မပေးချင်တာ၊အဖေကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ၊ “သားအဖေ မိန်းမယူလိုက်ပြီ။ […]
Posted on November 8, 2019 November 8, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
“အဖေမှအဖေပဲ” ကျမနာမည် သီတာ …. တစ်ဦးတည်းသော သမီးလိမ္မာလေးပေါ့…… အတိအကျပြောရရင် မိတဆိုးလေး သီတာ ….. အမေက ကျမ ၁၀တန်းနှစ်မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးဆုံးသွားတယ် ….. အဲ့ကတည်းက အဖေတစ်ခု သမီးတစ်ခုနေလာတာ ….. ကျမ ဘွဲ့တွေရပြီး အခု နာစ်မ ဖြစ်တဲ့အထိဆိုတော့ ၇ နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ ….. လက်ရှိကျမအသက် ၂၃ …… အဖေခမျာလည်း တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ရှာလိမ့်မပေါ့ ….. တခါတခါ ကျမ ဆေးရုံကပြန်လာရင် ရပ်ကွက်ထဲက မဝေ တို့ မနှင်းတို့ ကျမတို့အိမ်ထဲက ထွက်လာတာ လမ်းထိပ်မှာတွေ့ရဲ့……. သူတို့ကတော့ ရပ်ကွက်ထဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိုက်ကုံးဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတာလေ …… ကျမလဲ နားစွန်နားဖျားတော့ ကြားရဲ့ …… အဖေခမျာ […]
ကျွန်တော်နှင့် တီကေ+အမေ – စ\_ဆုံး ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ko si -ရေးသည်။ အင်းစက်စာပေဖြစ်ပါသည်။ အရင်​ဆုံး ကျွန်​​တော့်​နာမည်​ကို မိတ်​ဆက်​ပါရ​စေ ကျွန်​​တော်​ နာမည်​ ​ဝေလင်း အသက်​က ၁၄ နှစ်​ ၉တန်း​ကျောင်းသားပါ ​ဝေလင်းတို့ မိသားစုမှာ သူ အပါ အဝင်​ အ​ဖေနှင့်​ အ​မေ ရယ်​ သူ့အ​ဒေါ် ​ကေသီရယ်​ ၄ ​ယောက်​ဖြစ်​ပါသည်​ သူက​တော့ တီ​ကေဟုပင်​​ခေါ်ပါသည်​ တီ​ကေနှင့်​ သူမှာ သူမက သူ့ထက်​ ၁၀ နှစ်​​လောက်​ပဲ ပဲကြီး​လေသည်​ တီ​ကေ၏ အသက်​မှာ ၂၄ နှစ်​ခန့်​ပင်​ ရှိ​သေးပီး သူမသည်​ ​ကျောင်းပြီး ဘွဲ့ရပီးထဲက အ​ဖေ အ​မေတို့ Company တွင်​ပင်​ ဝင်​​ရောက်​လုပ်​ကူ​ပေး​နေသည် ​ဝေလင်းကို​တော့ တီ​ကေသည်​ […]
** သူငယ်ချင်းအမေအကိတ်ကြီး **** ( စ / ဆုံး ) ================== သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေသာဆိုတယ် အသက်ကတော့သိပ်ကြီး သေးဘူးဗျ. . . ၄၀ကျော်လောက်ပဲရှိအုံးမယ် Gym ကစားတာ ဘယ်လိုကစားလဲတော့မသိဘူး တနေ့ တခြား ဖင်ကြီးကကြီးပီး ရင်းကိုကြီးလာတာဗျာ. . အိမ်ကလဲနှစ်ခြံကျော်လောက်ဆိုတော့ ညနေတိုင်းသွားသွားငမ်းရတာအမော. . . သူ့ ယောကျာ်းကကား သမား ဆယ်ဘီးကားတွေမောင်းတာဗျ . . . ပုံစံကတော့ဖန်ရင်ရ မယ့်ရုပ်ကြီးဆိုတာသိတော့လဲ စွန့် စားရတာပေါ့ဗျာ. .ဒီလိုနဲ့ တ ရက် ဘော်ဒါနားသွားတော့. . . သား ကိုထက် သားသူငယ်ချင်း မရှိဘူး သူ့ အဖေနဲ့ လိုက်သွားတယ်ကွ. . . အော်ဟုတ် […]
မင်းကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ကုန်ပြီ (18+) “ အစ်ကိုလေး ….” အိပ်မပျော်ပဲ မျက်လုံးကြောင်နေသော ကိုသက်အောင် လန့်သွားသည်..။ “ ဟင်…ပုံ့ပုံ့…မအိပ်သေး ဘူးလား…..” ကွယ်လွန်သူ ဇနီးသည်နှင့် ချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့ပုံကလေးများကို ပြန်လည် စမြုံ့ပြန်နေသော ကိုသက်အောင် ရဲ့ ဘော်ဒါကြီးက တင်းမတ်နေသည်..။ ပုံ့ပုံ့က အဲဒါကြီးကို တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက်လေသည်..။ “ မမသီ သားတွေက အရမ်းသေးပေါက်တာပဲ……” ကိုသက်အောင် မြင်သာအောင် အနှီးနှစ်ထည်ကို ကိုင်ပြီး မြှောက်ပြလိုက်သည်..။ ကိုသက်အောင် ကုတင်ပေါ်မှထကာ ပုံ့ပုံ့အနားသို့ လာခဲ့သည်..။ ပုံ့ပုံ့ထံမှ သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းလေးကို ဦးစွာ ရှူရှိုက်မိလိုက်ရသည်..။ “ ထားခဲ့လေ….မိုးလင်းတော့ ..ငါလျှော်လိုက်ပါ့မယ်….“ “ အို….မဟုတ်တာ….” ပုံ့ပုံ့က လက်ကို ပြန်ရုတ်ပြီး ပြောလိုက်သည်..။ ဝတ်ထားသော ညဝတ်အင်္ကျီလေးအောက်မှ […]
Total visitors : 32,536
Total page view: 115,419